သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: တစ်ခါတစ်လေမှာ ဒီသီချင်းလေးတွေ ဆိုတတ်၏
တွံတေးသိန်းတန် - ပန်းနွယ်ကစိမ်း
စုံနံ့သာမြိုင် ရှာပုံဖွင့်ပါလို့ရယ်.. ရင်နင့်အောင် ချစ်ရှာလွန်းသူ အပူတပြင်းရှာဖွေ
ရေမြေဆုံးဆုံးစေ့ တစ်ကယ်၊ လှဂမုန်းနွယ် ချစ်သက်ဦးရယ်
ဘ၀ဆုံးတကယ် မပစ်ရက်ဘူးရွယ်၊ ရူးတယ်ဆိုစေဦးတော့
အဲဒီသီချင်းဆိုမိတိုင်း ပြည်တော်ကို သိပ်လွမ်းတယ်။ နှလုံးသားထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖွင့်ပြီးဆိုလိုက်ရရင် တစ်နည်းတစ်ဖုံလဲ ပြည်တော်ပြန် အလွမ်းပြေတယ်။ (အိမ်သားတွေကတော့ ပြေးတော်မြန်ပေါ့) မြန်မာ့တူရိယာတွေနဲ့ ဖွဲ့သီထားတဲ့ ဒီတေးသွားဟာ သိပ်ကိုနူးညံ့လှပတယ်။ စာသားတွေကလည်း သိမ်မွေ့တယ်။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ မြင်နေရတဲ့ နေရောင်ကွက်ကျားလင်းနေတဲ့ တောလမ်းလေးတွေ၊ မြန်မာဆန်ဆန် ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့ပုံလေးတွေ က ရင်ကိုအေးမြစေတယ်။
ဒီသီချင်းကတော့ ဒီအတိုင်းနားထောင်ရင်… တယောသံတွေ… Wah Wah effect… တွေ echo တွေနဲ့ အထူးသဖြင့် စပီကာကောင်းကောင်းနဲ့ ဖွင့်ရင် သီချင်းအစမှာ၊ effect တွေက နားထောင်သူကို လေပေါ်မှာ ပျံသန်းနေသလို ခံစားရစေတယ်။ အထူးသဖြင့်… ဟိုင်းဝေးပေါ်လမ်းက အရှိန်ပြင်းပြင်းမောင်းနေတဲ့ ကားတစ်စင်းထဲမှာ စပီကာကို ခပ်ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ရင်… လမ်းဘေးမှာ တရိပ်ရိပ်ကျန်ခဲ့တဲ့ သစ်ပင်တွေလိုပဲ သီချင်းသံတွေက ကားရှေ့ကနေ ကားနောက်ခန်းကို အရှိန်နဲ့ ပဲ့တင်ထပ်ပြီး ပြေးသွားသလိုမျိုး…..
အပေါ်ယံနားထောင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ၊ သေသေချာချာတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်…. စစ်တွေကို မြင်လာရတယ်။
စစ်ဆိုတာ လက်နက်တွေနဲ့ ကိုင်တိုက်ရတဲ့ စစ်တွေမျိုးချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ အဇတ္တနဲ့ စစ်တိုက်မှုတွေ၊ အမှန်အမှားဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေနဲ့ စစ်တိုက်ရတာတွေ…စတဲ့ နက်နဲမှုတွေ။
ပထမတော့ တက်ဂ်တဲ့ ညီမလေး စိတ်ညစ်သွားမှာစိုးလို့ မတင်တော့ဘူးလို့…
"ရင်ထဲက ခံစားချက် အစစ်အမှန်လေးတွေပါ ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်" လို့ သူက ဆိုလာတော့….
ဒီလို မြင်ယောင်လာတဲ့ စစ်ပွဲတွေထဲမှာ ဒီလိုစစ်ပွဲမျိုးတွေလည်း ပါပါတယ်လို့…
အရင်ကတော့ တက်ဂ်ဂိမ်းတွေမှာ ဆက်ပြီး မတက်ဂ်ဖြစ်ဘူး။
မမေနဲ့ အစ်မတန်ခူးကို တက်ဂ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တော့ မြန်မာပြည်ပြန်သွားကြပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အိမ်ကသူငယ်ချင်းတချို့ကိုသွားသတိရမိတယ်…။ သူတို့က တွံတေးဦးသိန်းတန်ကိုသိပ်ကြိုက်ကြတာလေဗျ…။
Comment by ဏီလင်းညို — October 14, 2009 @ 7:26 pm |Edit This
လာဖတ်သွားတယ်… စိုင်းထီးဆိုင် သီချင်းတွေကို ကြိုက်တယ်…. ဒါနဲ့စကားမစပ်… ရန်ကုန်က အမကို အိမ့်ချမ်းရဲ့ဝထ္တုပို့ခိုင်း ထားတာ ရပြီ…အခုဖတ်နေတယ်
Comment by rose of sharon — October 14, 2009 @ 7:33 pm |Edit This
Comment by miinthant2009 — October 14, 2009 @ 7:56 pm |Edit This
အစ်မ ပန်းနွယ် သီချင်းကို ကြိုက်မှန်း.. “မီးရောင်မှိန်မှိန် အခန်းထဲတွင် လူသုံးယောက် ထိုင်နေသည်။” ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးလား..မသိဘူး။ အဲဒါကို ဖတ်ပြီးကတည်းက သတိထားမိတယ်။
Comment by pN — October 14, 2009 @ 9:28 pm |Edit This
အိမ့်ရေ… လွမ်းတတ်တဲ့အထဲမှာ တွံတေးသိန်းတန်လဲပါတယ်…
ဟိုတလောဆီက ညဘက်ကြီး လူခြေတိတ်ချိန် ရုံးက အိမ်စာတွေ လုပ်တာ တွံတေးသိန်းတန် သီချင်းလေးနားထောင်ရင်းလုပ်တာ စိ်တ်ထဲ မြန်မာပြည်ရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်… ဟိုးအဝေးကလွင့်လာတဲ့ တွံတေးသိန်းတန်သီချင်းသံကို တခါတခါ တမ်းတမိတယ်…
ခိုင်ထူး၊မွန်းအောင်က ခုထိနားထောင်ဖြစ်တုန်း…. အမတခါ အိမ့်ဆီမှာ ကော်မန့် ရေးခဲ့သလိုပဲ စိုင်းထီးဆိုင်ကို အသက်ကြီးမှ ကြိုက်တာတူတယ်… အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကတော့ နဲနဲဝေးတယ်ညီမရေ… ကယ်လီကလပ်စင်၊ ခရစ်တီးနား၊ အလစ်ရှာကီး၊ ရှနိုင်းရား တို့သီချင်းလေးတွေတော့ ရင်ထဲငြိတယ်… တခါတခါ နားထောင်ရင်းမျက်ရည်တောင်ဝဲမိတယ်…
“ကိုယ့်ရဲ့ အဇတ္တနဲ့ စစ်တိုက်မှုတွေ၊ အမှန်အမှားဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေနဲ့ စစ်တိုက်ရတာတွေ…” တဲ့လား… စစ်ပွဲတွေဆို ကိုယ်နဲ့ အဝေးမှာလို့ထင်နေခဲ့မိတာ… အိမ့်ထောက်ပြတာလေး ဖတ်မိမှ တခါတခါ ကိုယ်လဲ စစ်ပွဲတွေထဲ ရောက်နေပါ့လားဆိုတာ သတိထားမိတယ်…
အမှတ်တရတက်ဂ်တာ ကျေးဇူးပါအိမ့်ရေ… ရေးပေးမယ်နော်…
Comment by တန်ခူး — October 14, 2009 @ 10:06 pm |Edit This
သီချင်းလေးတွေကို တစ်ပုဒ်ချင်စီကို သေသေချာချာနားဆင်မိတယ်……..
ရေမြေဆုံးဆုံးစေ့ တစ်ကယ်၊ လှဂမုန်းနွယ် ချစ်သက်ဦးရယ်…..ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို
အင်း … ဘာလိုလိုနဲ့ နှင်းလဲ အသက်တွေမငယ်တော့ပါဘူး
သူများနိုင်ငံမှာနေမှ မြန်မာ သီချင်းကြီးတွေကို အရင်ကထက် တော်တော်ခံစား သီဆိုတက်နေပြီလို့ တွေးလိုက်မိတယ်…..
မမအိမ့် ရင်ထဲက ကျလာတဲ့ ခံစားချက်လေးကိုပါ ထပ်တူခံစားသွားပါတယ်….
( ကျမ နှစ်သက်လေးစားခဲ့သော အတုယူ အားကျမိသော အိမ့်ချမ်းမြေ့ ဆိုတဲ့ ကလောင်ရှင်တစ်ယောက်ဆီကနေ
ခုလို လေးနက်စွာဖြေကြားပေးလာသော တဂ်ပို့တစ်ခုကို ကျမ အရမ်း မြတ်နိုး တန်ဖိုးထားမိပါသည် …..)
မမအိမ့်ရေ..ခုလို ဖြေကြားရေးသားမှုအားလုံးအတွက် ပြောမပြတက်အောင် ကျေနပ်မိပါတယ်နော်
Comment by နှင်းဟေမာ — October 14, 2009 @ 10:12 pm |Edit This
မင်္ဂလာပါ.. မကြီး ရေ… တွံတေးသိန်းတန် ကတော့ မြန်မာတို့အတွက်တော့ မရှိမဖြစ်ပေါ့….ပြေးကြိုတော့ ထွေးညို ရေ…လို့သာ ဟစ်လိုက်လို့ကတော့
လွမ်းပြီးလွမ်း ပဲ။ အသီးတရာအညှာတစ်ခု သီချင်းထဲကလို့ ရောက်ရာနေရာဒေသတွေမှာ ပျော်ပျော်နေပြီး ဘ၀ရဲ့ကျရာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြရပြီလေ…
အော် ….လွမ်းမိပါပေါ့…ကိုသိန်းတန် ရေ…
Comment by စာချစ်သူ — October 15, 2009 @ 12:04 am |Edit This
သီချင်းနှစ်ပုဒ်လုံးကို သေချာနားထောင်တယ် မလေး။
ပထမအပုဒ်အတွက် အမေနဲ့ရွာကို လွမ်းသွားတယ်။
ဒုတိယအပုဒ်ကတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့မလေးရယ်၊ အဆိုရှင်က ခံစားသလို ခံစားမိတယ်။
ဒါပေမယ့် မလေးရယ်၊ နားထောင်ရင်းတွေးနေမိတာက
စစ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိပေမယ့် စစ်တွေ ဖြစ်နေကြတုန်းပဲနော်၊ တစ်ဦးတယောက်ချင်းကောင်းဖို့လိုတာ သိကြပေမယ့် အတ္တတွေ မာနတွေကို လျော့လို့မရ၊ ကိုယ်က အလျှော့ပေးပေမယ့် အလျှော့ပေးတဲ့အပေါ် လိုက်နင်းနေတာ သိနေတော့ မခံချင်ပြန်၊ ဒါနဲ့ စိတ်တွေက မကြည်လင်၊ ကိုယ်က မကြည်လင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်က လိုက်ပြီး မကြည်လင်၊ အားလုံး ကူးစက်ကုန်တာပဲ၊ ဘယ်လိုမှ ကယ်တင်လို့မရတော့တာ ဒီနေ့ထိပါပဲလားနော်။
Comment by အပြုံးပန်း — October 15, 2009 @ 1:39 am |Edit This
မသီတာ တယောက်လည်း စစ်ပွဲတွေထဲရောက်နေလို့ ဘလော့ဘက် အားနည်း … အားနည်းရကောင်းလားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရ…
ဘလော့ဂ် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို အားပေးလျက်
Comment by S-C — October 15, 2009 @ 3:23 am |Edit This
Comment by တောသားလေး — October 15, 2009 @ 4:30 pm |Edit This
မလေး ဘလော့ဂ်ကို တနေ့က လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနေ့က အကြာကြီး နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သီချင်းက ပန်းနွယ်ဖြစ်သွားတယ်။
စိမ်းကားတဲ့မလေးကိုလည်း အီးမေးလ်လိပ်စာအသစ်မသိတော့ ဘယ်လိုရှာဖွေရမှန်း မသိတော့ဘူးလေ။
Comment by ပန်ဒိုရာ — October 16, 2009 @ 11:19 am |Edit This
သီချင်းအကြောင်းပြောမလို့မဟုတ်ဘူး. အစ်မရဲ့စာအုပ်အကြောင်းပြောမလို့ပါ..။ စာအုပ်ကိုအိမ်ကပို့ပေးလိုက်တာရပြီ… ၄၊ ၅ ပုဒ်လောက်တော့ပြန်ဖတ်ပြီးပြီ..အရင်ဖတ်တုန်းကလောက်တော့ ခံစားချက်မလာသလိုဘဲ..။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်ဆိုတော့ အင်တာနက်မရှိလဲ ဖတ်ချင်တဲ့အချိန်ဖတ်လို့ရသား…။
စာတွေပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ စာကြောင်းတိုင်းလ်ိုလိုဘဲ “တယ်.. ပါတယ်..ကြပါတယ်.. ကြတယ်” နဲ့အဆုံသတ်ထားတာတွေ (တော်တော်) များနေတော့ တစ်မျိုးကြီးဘဲ..အရင်တုန်းကသတိမထားမိဘူး..။ စာတစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ကြောင်း အချိတ်အဆက်လေးတွေ နည်းနည်းလိုနေသလားလို့..ပြီးတော့
တစ်ကြောင်းတည်းပေါင်းရေးလို့ရတဲ့စာတွေမှာ နှစ်ကြောင်းစီဖြစ်ဖြစ်နေတာတွေရယ် နောက်ပြီး စာကြောင်းတွေကအရမ်းတိုနေတယ်..။
Comment by Evergeen Phyo — October 17, 2009 @ 6:39 am |Edit This
ခံစားမှုအပြည့်နဲ့ ရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့သီချင်းတွေက အချိန်အတော်ကြာအောင် လူတွေရဲ့စိတ်ထဲ စွဲထင်နေစေတယ်နော်.. မလေးကြိုက်တဲ့ သီချင်းငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်းတွေကို နားထောင်သွားပါတယ်.. ပန်းနွယ်ကစိမ်း စာသားတွေ သိပ်လှတယ်.. Road က ရိုးရိုးလေးနဲ့ ပေးချင်တဲ့ message ကို သေချာနားလည်လိုက်တယ်.. မိုက်တယ်..
ညီမလည်း သီချင်းအော်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်.. ဘယ်သူမှအနားမရှိတုန်း
“ပန်း နွယ် က စိမ်းးးအိမ်းးးဟိမ်းးး စိမ်းး တယ်”
Comment by ShwunMi — October 17, 2009 @ 8:59 am |Edit This
ဟိုနေ့ က အိမ်မှာဆိုတော့ ရဝေရဝေအော်မြိုင်စောင်းမှလ ဆို…
Comment by Htate Htar (ူလ့ရိပ်သာ) — October 17, 2009 @ 5:10 pm |Edit This
မမအိမ့်ညည်းတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်တစား နားထောင်မိပါတယ်။ “စစ်ဆိုတာ လက်နက်တွေနဲ့ ကိုင်တိုက်ရတဲ့ စစ်တွေမျိုးချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ အဇတ္တနဲ့ စစ်တိုက်မှုတွေ၊ အမှန်အမှားဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေနဲ့ စစ်တိုက်ရတာတွေ…စတဲ့ နက်နဲမှုတွေ။” ဆိုတဲ့ စကားက အတွေးတွေ အများကြီးကို ပေးပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စာကြောင်းတိုင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး ဖတ်မိပါတယ်…
Comment by ရွှေပြည်သူ — October 18, 2009 @ 8:32 am |Edit This
ဖျားနေ၍ တစ်ယောက်ချင်းစီကို စာမပြန်တော့ပါနော်..
အစ်မလရိပ်သာ… ရဝေရဝေ အော်မြိုင်စောင်းမှလ ရဲ့ သီချင်းခေါင်းစဉ်က ဘာတဲ့လဲဟင်…
Comment by မလေး — October 19, 2009 @ 12:27 am |Edit This
မလေးရေ ……….. ခေတ်မမှီဘူးပဲ ပြောပြော တုံးတယ်ပဲ ပြောပြော၊ အဲဒီလို ဟိုတုန်းက သီချင်းလေးတွေကို နားထောင်ရတာ နှစ်သက်တယ်။ စာသားတွေကလည်း အဓိပ္ပါယ် အပြည့်ရှိတယ်လေ။ မလေးရဲ့ စာပေတွေကို အစဉ်အားပေးနေပါတယ်။
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — October 19, 2009 @ 1:30 am |Edit This
မလေး ဖျားနေတယ်လား ခုရော နေကောင်းသွားပြီလား ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်နော့.. သားသားရော နေကောင်းရဲ့လား … အဖျားကူးမှာ စိုးလို့ မလေးရေ..
Comment by ခွန်မြလှိုင် — October 20, 2009 @ 6:43 am |Edit This
သံစဉ်မဲ့အလင်္ကာများ ကို လာလည်ပါတယ် ..
Comment by aye — October 21, 2009 @ 10:09 am |Edit This
ဒဏ္ဍာရီ … ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဒဏ္ဍာရီ
ခွန်မြလှိုင် … ခု သက်သာပြီ လှိုင်ရေ..
aye.….. အဝေးကြီးက လာလည်သော အေးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ အေးလာတာ.. ပျော်တယ်။
Comment by မလေး — October 22, 2009 @ 8:34 am |Edit This
ညီမလေးရေ.. လွယ်လွယ်လေး ရယ် ခေါင်းစဉ်က ဥဒေါင်းတွေ တွန်သံ တွန်သံ ကြားရင်ပေါ့ ကွယ်..ဟဲ ဟဲ။နောက်ထပ် မ မေးနဲ့ နော်။
သခင်မြင်လာ အော်ကြင်ပါဦး လို့ ထပ်ဖြေမယ်။
Comment by Htate Htar(လရိပ်သာ) — October 25, 2009 @ 9:15 pm |Edit This